Somaali | Mini-Maria Göteborg
Macluumaadka ku saabsan waxbarashada waalidiinta
Mini – Maria waxaa ay magaalada Göteborg kaga taalaa saddex meelood waxaa na haboon in aad caawimaad u raadsato hadba qaybta ugu dhow gurigga aad degentahay. Mini – Maria waxaa ka shaqeeya koox ka kooban shaqaalaha arimaha bulshada, kalkaalisooyin caafimaad, maan/maskax dhaye (psykolog) , dhakhaatiir iyo xog – hayno. Mini – Maria waa wada shaqeyn ka dhxaysa degmada iyo daryeelka caafimaadka. Dhamaan booqas hooyinka Min – Maria waa bilaa lacag haddii aad degentahay degmooyinka Göteborg iyo Ökcerö. Waxaa na qabanaya xeerka sir qarinta isla markaa waxaad noqon kartaa mid qarsoodi aha booqashada ugu horeysa. Marka aad soo booqato Mini – Maria waxaa lagu siinyaa caaw imaada iyo kaalmada aad u baahantahay iyada oo laga duulayo baahidaada iyo tan qoyskaaga .